I-Lo Scrigno Country House e-Ragusa
Le ndawo yokuhlala enethezekile yadalwa kusukela ekubuyiselweni kwendlu yasemakhaya yasendulo, ecwiliswe emaphandleni aseRagusa ngezindonga zayo zamatshe ezomile. Indlu izungezwe ingadi encane enendawo enomthunzi eyakhiwe isihlahla samabhilikosi futhi ifakwe ifenisha yasengadini. Ngaphakathi kunekhishi elakhelwe ngaphakathi, umbhede osofa ababili, indawo yokucima umlilo ekhoneni elinengilazi kanye negumbi lokugezela elineshawa. Izitezi zokhuni eziholela ku-mezzanine ezinombhede okabili.
Indlu ithule kakhulu futhi ilungele ukujabulela izikhathi zokuphumula. Engadini encane ungasebenzisa izoso, Umsingathi uyi-trekker eshisekayo etholakalayo ohambweni kanye nohambo lwamabhayisikili. U-Lo Scrigno unesikhundla esimaphakathi e-Val di Noto. I-Ragusa Ibla ingamakhilomitha angu-15, i-Modica ku-20 km, i-Scicli ku-28, i-Noto Calamosche ne-Vendicari ku-35 km. I-Punta Secca (indawo ye-Il Commissario Montalbano) ingafinyelelwa ngesikhathi esifushane, kanye nechweba lasePozzallo lapho ukuxhumana ne-Malta kusuka khona.
I-San Giacomo iyingxenye kamasipala wase-Ragusa othule kakhulu futhi ecwiliswe emaphandleni ase-Iblea phakathi kwezihlahla ze-carob kanye nezihlahla zomnqumo ezinamakhulu eminyaka emngceleni wezindonga zamatshe ezomile. I-1 km ukusuka endlini kunekhemisi, isevisi yezokwelapha, isitolo esikhulu. -bazaar, wezinwele, i-butcher, kanye pizzeria. Ku-3 km we-Cava dei Servi lapho umfudlana we-Tellesimo ugeleza khona, i-tributary ye-Tellaro. Lokhu kusakazwa kungenye yezinto ezihluke kakhulu endaweni yaseHyblean. Umbhede ogeleza kuwo i-Tellesimo unezindonga ezilengayo ezibhotshozwe imigede eminingana engavakashelwa futhi ibe, engxenyeni yokugcina, ibe mincane futhi ibe yizihlukumezi, ngaleyo ndlela ilondoloze, ngenxa yokungaguquki kwayo, i-ecosystem esekhona.
Ngiyatholakala ukuze ngincome uhambo oluya endaweni yase-Sicilian